नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट चलाउने बतास समूहको एडभाइजर नै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु – Cn Chautari
पुष २३, २०७८ शुक्रबार 390
व्यापारिक घराना ।
बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा रेस्टुरेन्ट खोल्नेगरी जग्गा भाडामा लियो । २०७७ सालमै उक्त जग्गा भाडामा लिइएको थियो। जसमा अहिले भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सजावटको काम चलिरहेको छ ।
बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गत बिपिएस लिजिङ कम्पनीले महिनामा दुई लाख २१ हजार भाडा दिनेगरी सम्झौता गरेको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी मात्र नभएर पशुपतिनाथ मन्दिरमा क्षेत्रमा रहेको धर्मशालामा पनि होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
धर्म शालालाई भाडामा लिएर उसले होटल चलाइरहेको हो ।यी दुवै कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे पालामा भएको थियो । त्यो बेला एमाले नेता योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए । उनकै कार्यकालमा उक्त सम्झौता भएको थियो ।
तर, भट्टराईले यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको प्रष्टिकरण दिइसके का छन् ।अहिले बताससँगै नेकपा एमालेको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसअघि यति समूह र ओम्नी समूहले विभिन्न ठेक्का आफ्नो हात पारेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दुई समूहले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेका थिए ।बतास समूहलाई पनि तत्कालीन ओली सरकासँगै जोडेर हेर्न थालिएको छ । तर, बतास समूह अन्तर्गत बतास फाउण्डेसनको एडभाइजरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवा रहेको पाइएको छ ।
Prevनेतालाई ‘धम्क्याउने’ एसपी पाण्डे निलम्बित !
Nextसरस्वती लामा । भन्छिन2करोड सहित म सग बिहे गर्ने कोहि छ ।